यसरी हाँस्नुहोस् हुन्छ फाइदैफाइदा, फेला पर्‍यो यस्तो नयाँ तरीका ! « गोर्खा आवाज
यसरी हाँस्नुहोस् हुन्छ फाइदैफाइदा, फेला पर्‍यो यस्तो नयाँ तरीका !
एजेन्सी । एक अध्ययनमा हाँसोले मानिसलाई शारीरिक र मानसिक रुपमा स्वस्थ बनाउन सहयोग गर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । हाँसोले हाम्रो शरीरलाई आराम दिने तनाव हटाउन सहयोग पुर्याउँछ । तनावले मानिसको शरीरमा हुने रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई कमजोर पार्छ ।
तर हाँसोले भने रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा वृद्धि हुन्छ । हाँसोले तनाव हर्मोनलाई घटाउने काम गर्छ । हाँस्दा वृद्धवृद्धालाई अल्जाइमर रोग लाग्न नपाउने अनुसन्धानको निष्कर्ष छ । इन्डोर्फिन नामक हर्मोन वृद्धि हुने भएकाले यसले पीडा पनि कम गर्छ । रक्तनलीमा सुधार गर्ने भएकाले हृदयघात हुने सम्भावना पनि कम हुने चिकित्सकको भनाइ छ ।
तौल घटाउन पनि हाँसोले सहयोग गर्छ । दैनिक १५ मिनेटसम्म हाँस्दा ४० क्यालोरी खर्च हुन्छ । यसले तौल नियन्त्रण हुने अनुसन्धानको निष्कर्ष छ । हाँसोले मानिसलाई सकरात्मक प्रक्रियामा लैजान सहयोग गर्छ । नर्वेमा गरिएको एक अध्ययनले हाँसोको भावना हुने मानिस नहाँस्ने व्यक्ति भन्दा बढी बाँच्ने र त्यस्ता व्यक्तिको बौद्धिकस्तर पनि बढी हुने देखाएको छ ।